Telefoonka isku laaban ee Samsung ayaa imaan doona si ka dhakhso badan sidii la filayay | Androidsis
Muddo bilo ah Waan ognahay Samsung inay ku shaqeyso taleefankeeda isku laabma. Naqshad xilligan la baabtiisay sida Galaxy X, in kasta oo magaceeda ugu dambeeya uu ka duwanaan doono. Dhowr toddobaad ka hor ayaa la sheegay in taleefanka la soo bandhigi doono bilowga sanadka soo socda. Iminkana, sida ay sheegayaan warbixinnada shirkadda lafteeda, bilaabitaankeedu wuu ka dhowaan doonaa sidii la filayay.
Marka taas suuqa ayaa durbaba u diyaar garoobaya taleefankan cusub ee Samsung. Taleefan u muuqda inuu ka tirsan yahay nooc cusub oo shirkaddu ay abuureyso, sidaas darteed wuxuu ku jiri doonaa nooc ka duwan noocyada kale ee shirkadda Kuuriya laga leeyahay.
Faahfaahinta noo timid ee ku saabsan qaabkani waa iyada oo loo marayo daadinta. Sababtoo ah shirkaddu waxay dooneysaa inay wax walba qarsoodi iyo xakameyso. Go'aan la fahmi karo, iyadoo la tixgelinayo inuu noqon doono taleefanka ugu horreeya ee isku laaban suuqa. Marka rajadu waa ugu badnaan.
Dabacsanaanta, adkaysiga iyo iska caabinta taleefanka ayaa ah saddex waji oo muhiim u ah guushiisa suuqa. Wax ay Samsung ogtahay, markaa waa hubaal in ahmiyad gaar ah la siiyay dhinacyadan markii la soo saarayo qalabka. Waxa intaa dheer in la sameeyo tijaabooyin badan oo arrintan la xiriira.
Waqtigan xaadirka ah, taariikh cayiman lama siinin imaatinka qaabkani. Markii ugu dambeysay ee wax la maqlo waa in la soo bandhigo Janaayo, CES 2019. Taleefan ay Samsung ka bilaabi doonto dhamaadka sanadka dambe.
Waa inaan sugno inta shirkaddu soo bandhigeyso faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan. Sida filashada ka hor Samsung taleefanka isku laaban ugu badnaan. Marka waxaan rajeyneynaa inaan waxbadan ka ogaanno bilowgeeda iyo soo bandhigiddeeda toddobaadyo gudahood. Miyaad rajeyneysaa tusaalahan?
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Samsung » Mobilka Samsung ee isku laaban ayaa imaan doona ka hor intii aan la filayn
Twitter Lite wuxuu gaaraa 21 dal oo cusub oo leh astaamo cusub